Permalinks firfircoon ee WordPress > Vielhuber David
Permalinks firfircoon ee WordPress07
Nidaamka loo yaqaan 'WordPress permalink' ayaa si wanaagsan loola qabsan karaa baahiyahaaga adoo kaashanaya astaamaha qaabdhismeedka . Dejinta% postname% waxay u badan tahay xalka ugu caansan uguna macquulsan. Si kastaba ha noqotee, haddii aad rabto inaad hirgeliso xiriiriyeyaal firfircoon oo dhab ah, marka hore waa inaad ku ballaarisaa nidaamka lambarkaaga.
WordPress-ka awoodda badan ee dib-u-qorista API wuxuu bixiyaa xulashooyin badan oo ku habboon nidaamka nidaamka shuruudahaaga. Haddii aad rabto xorriyad dhammaystiran, waad u habeyn kartaa WordPress si URL kasta oo (oo leh tiro heerar ah) ay suurtagal tahay. Natiijo ahaan, tusaale ahaan, wicitaan ku
soo saaray. Tani waxay ka dhigan tahay in dhammaan siyaabaha kale ay u furan yihiin barnaamijka router-kaaga adiga oo soo saaraya waxyaabaha u dhigma. Si loo gaaro dhaqanka la doonayo, waxaan isticmaalnaa "rewrite_tag" iyo "rewrite_rule" ficilada waxaanna ku darnaa lambarka soo socda feylka function.php ee mawduuca firfircoon:
Markaa waa lagama maarmaan in la badbaadiyo goobaha permalink markale (Settings> Permalinks> Codso isbeddelada ama, haddii kale, wac flush_rewrite_rules () hal jeer ) si xeerarka cusubi u dhaqan galaan. Ugu dambeyntiina, waxaan ku abuureynaa bog cusub 'perwink' "rewrite" iyo template "rewrite-page", oo ay tahay in marka hore la abuuro iyadoo la isticmaalayo feylka soo socda:
Qaabeynta qaabeynta, dhammaan URL-yada waa la heli karaa. Isbeddelka $ base waxaa sidoo kale lagu qalabeyn karaa wax kasta oo ka kooban hoosaadyo buul ah: Qiimaha "pop / up", tusaale ahaan, wuxuu u saamaxayaa cinwaanka URL-ka
Dhammaan URL-yada kale saameyn kuma yeeshaan - kuwani waxaa ka shaqeeya WordPress sida caadiga ah.